Home Wararka Warqad kasoo baxday xafiiska MW Farmaajo oo lagu go’doominayo dhaqdhaqaaqa Gud. Mursal
Warqad kasoo baxday xafiiska MW Farmaajo oo lagu go’doominayo dhaqdhaqaaqa Gud. Mursal
Warqad ka soo baxday xafiiska MW Farmaajo aya lagu sheegay in laga bilaabo maanta laga mamnuucay in ay gawaarida kasoo galaan illinka koowaad (Gate 1) iyadoo ujeedka rasmiga ah uu yahay in la go’doomiyo guddoomiyaha BJFS Maxamed Mursal.
Waxaa maanta laga soo celiyay illinka laga galo madaxtooyada Xildhibaano u socday hoyga Gud. Mursal ee Villa Hargeysa, waxaana lagu wargeliyay in amar ka soo baxay Madaxtooyada aanay geli karin hoyga Gud. Mursal.
Waa ku tumasho Dastuurka iyo dambi weyn in Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada xadeeyo gaadiidka iyo cidda u imaan karta Guddoomiyaha Barlamaanka ama Xafiisyada Barlamaanka oo laga dhigay 3 baabur. Ujeedadu waa joojinta shaqada barlamaanka. Taas waxay markhaati u tahay inuusan jirin dastuur iyo sharci la dhowrayo muwaadin kastana u bannaan tahay inuu ka tashado madaama madaxtooyada aysan sharci iyo dhaqan dowladeed u hoggaansaneyn. Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada wuxuu galay gefka sharci lagu eedeyn karo.
Arrintan aya keeni karta isku dhac ciidan iyo uu dagaal sokeeye ka dhaco madaxtooyada. Ficilada MW Farmaajo ayaa maalin walbo u sii ekaanay mid kalitalisnimo ah, waxayna taa keeni doontaa in dagaal sokeeye ka dhaco magaalada Muqdisho.
Previous articleSomaliland-Faces of Africa: Lessons from my Heritage
Next articleBeesha Ceyr oo maanta si dhoolus ciidan ah ku soo dhaweeysay C/raxman C/Shakur! (Video)
MW Iiran oo si adag uga hadlay aflagadadii loogeestay Nabi Mohamed...
Dilal caawa ka dhacay Magaalada Gaalkacyo